ADS Myanmar Blog – Page2– #No.1 Free Classified website in Myanmar
ads ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ads.com.mm ဝက်ဆိုက်ဒ်ကို အသုံးပြုရပိုလွယ်ကူအောင် app လေးထွက်ရှိလို့လာပါပြီ
ads.com.mm ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) အခမဲ့ ကဏ္ဍစုံကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ် ဖြစ်ပါတယ် ကဏ္ဍစုံတဲ့အတွက်ကြောင့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအစုံအလင်ကိုတစ်နေရာတည်းမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အလွယ်တကူရောင်းဝယ်လို့ရတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်
ads.com.mm မှာ ကြော်ငြာတွေစနစ်တကျရှိရဲ့လား?
ဒါကတော့ရိုးရှင်းပါတယ် ကဏ္ဍစုံဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့်အလျှောက် ကြောငြာတွေဟာလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့များပြားလာတာမို့ ကြော်ငြာတွေရဲ့အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန် ကြော်ငြာကိုစီစစ်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီး ရှိပါတယ် ads.com.mm ကိုရောက်လာတဲ့ကြော်ငြာများကို ထိုစီစစ်ရေးအဖွဲ့မှ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ads.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်သို့ရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်
ads.com.mm ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့သူတွေ နဲ့ ကြော်ငြာများအချက်အလက်ပြည့်စုံစေရန်အလို့ငှာ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ထားရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ် တစ်ခါတစ်လေ မိမိရောင်းလိုသောပစ္စည်းရဲ့ပုံနေရာတွင်ပုံထည့်လိုက်ပေမယ့် လိုင်းမကောင်းသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ နည်းပညာတစ်စုံတစ်ရာချို့ယွင်းမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း ပုံမပါဘဲ website ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် စီစစ်ရေးအဖွဲ့မှ ဖုန်းဆက်၍ လိုအပ်တဲ့ပုံပို့ပေးရန်တောင်းပေးပါတယ် ကဏ္ဍနေရာမှန်အောင် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပိုင်းတွင် ဥပမာ ဆိုင်ကယ်ကြော်ငြာတင်လိုက်တဲ့အခါ ကဏ္ဍနေရာမှားပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကဏ္ဍထဲရောက်ရမည့်အစား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကဏ္ဍထဲသို့ရောက်နေတတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဖြင့် စီစစ်ရေးအဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍထဲမှာတစ်စုတစ်ဝေးတည်းရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် စီစစ်ရေးအဖွဲ့မှ ယခုလိုပြုပေးခြင်းဖြင့် ဝယ်သူတွေအနေဖြင့် မိမိလိုချင်သောပစ္စည်းကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍထဲဝင်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် ကြော်ငြာများကိုအလွယ်တကူတစ်စုတစ်စည်းတည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်
ads.com.mm ဘက်မှကြော်ငြာတွေကိုဖျက်ပစ်တဲ့အခါမျိုးရှိပါတယ် ကြော်ငြာတွေကိုဖျက်ပစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်း (၂)မျိုးရှိပါတယ် ၁- ကြော်ငြာက ရောင်းထွက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် ရောင်းထွက်သွားတဲ့ကြော်ငြာကို ရောင်းသူဘက်မှဖျတ်ရပါတယ် ဒီလိုရောင်းထွက်သွားတဲ့ကြော်ငြာကိုဖျက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် တခြားဝယ်သူတွေအနေနဲ့ ရောင်းထွက်သွားကြော်ငြာကိုဖုန်းဆက်ပြီးအချိန်ကုန်ခံစရာမလိုတော့ဘဲ ကြော်ငြာသစ်များထဲမှရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ထို့အပြင်ရောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်း ရောင်းထွက်သွားတဲ့ပစ္စည်းအတွက်ဖုန်းဖြေရခြင်း အနှောင့်အယှက်တွေလည်းမရှိတော့စေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၂- ရောင်းသူဘက်မှ ကြော်ငြာတစ်ခုထဲကို ထပ်ခါထပ်ခါတင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဝယ်သူတွေအနေဖြင့် ကြော်ငြာတစ်ခုတည်းကို ထပ်ခါထပ်ခါမြင်တွေ့ရခြင်းမှ ကင်းဝေးအောင် ထပ်နေတဲ့ကြော်ငြာတွေကိုဖျက်ပစ်တဲ့အခါမျိုးရှိပါတယ် ဒီလိုဖျက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကြော်ငြာအကုန်လုံးကိုဖျတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ဥပမာ ရောင်းသူတစ်ဦးထဲမှ ကြော်ငြာတူ ၃ခုတင်ထားတယ်ဆိုပါတယ် အရင်တင်ထားတဲ့ကြော်ငြာတူ ၂ ခုကိုသာဖျက်ပြီး ကျန်တစ်ခုကိုတော့ ဖျက်ပစ်ခြင်းမရှိပါဘူး
ads.com.mm ကိုသုံးစွဲသူများအနေဖြင့် စိတ်ချလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်၏အောက်ခြေဘက်တွင်
သင်ရဲ့လက်ထဲမှာ ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ အခမဲ့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ads.com.mm app ကို ဒီမှာ https://goo.gl/yvbsNP ဒေါင်းလိုက်ပါ
Author NwayHtetPosted on July 3, 2017 July 3, 2017 Categories Ads UptoDate, Ads.com.mm, News, News and Press, OtherLeaveacomment on ads app နဲ့ အခမဲ့ရောင်းဝယ်လိုက်ပါ
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဝတ်ဖို့ ဒီဇိုင်း (၅) မျိူး
အရပ် ၅ပေ ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီး အရွယ်တင်တဲ့မိန်းကလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ် ဒေါင့်ဖိနပ်ပဲစီးစီး ဖိနပ်အပါးပဲ စီးစီး အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံပေ့ါ..ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားအောင် အပြင်သွားရင် ဝတ်သင့်တဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
(၁) ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် ဒေါင်အမြင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကိုယ်သွားရမယ့် လမ်း၊ နေရာအခြေနေကိုကြည့်ပြီး ဖိနပ်အမြင့်ရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ဒေါက်အချွန်မဟုတ်ဘဲ ဒေါက်အတုံးကြီးတာတွေ တပြေးညီဒေါင့်အမြင့်တွေက ဘယ်နေရာသွားသွားအဆင်ပြေစေပါတယ်
(၂) ချောင်တဲ့ ဘောင်းဘီရှည်တွေကို ဝတ်ဆင်ပါ။
ကိုယ်နဲ့မလိုက်လောက်ဘူးထင်တဲ့ ဘောင်းဘီပွ အရှည်တွေက ကိုယ့်ခြေထောင့်တွေပါရှည်သယောင်ထင်ရတဲ့အတွက် ကိုယ်နဲ့အရမ်းလိုက်ဖတ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ အောက်ပိုင်းပွတဲ့ ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ပြီး ဒေါင့်အမြင့်နဲ့ အလန်းစားနေလိုက်ပါ
(၃) အရမ်းမရှည်တဲ့ အပေါ်ကုတ်လေးတွေ ဝတ်ဆင်ပါ။
အရပ်ပုတဲ့သူတွေအတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံးက အရမ်းလည်းမရှည် အရမ်းလည်းမတိုတဲ့ အပေါ်ကုတ်လေးတွေ ဝတ်ဆင်တာပါပဲ သင့်ရဲ့ တင်ပါးအောက်ဖုံးရုံလောက်ပဲရှည်တဲ့ ကုတ်လေးတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်
(၄) ရာသီဥတုနဲ့အလိုက် V-Shape ပါတဲ့အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ပါ။
လည်ပင်းပိုင်းကို ဗီပုံသဏ္ဍာန်ကိုဝတ်ဆင်တာဟာ မိမိရဲ့လည်တိုင်အလှပေါ်လွင်စေပြီး တခြားသူတွေသတိထားမိနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ရဲ့အရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့သေချာဂရုစိုက်မိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး
(၅) ဂါဝန်တိုလေးတွေ ဝတ်ဆင်ပါ။
အရမ်းလည်းမတို အရမ်းလည်းမရှည်တဲ့ဂါဝန်လေးတွေက ၅ ပေဝန်းကျင်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ fashion တစ်မျိူးပါပဲ
အိမ်မှာနေရင်း ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေဝယ်ချင်ရင်တော့ ဒီလင့်ခ်မှာhttps://goo.gl/rgW99T ဝယ်လို့ရပါတယ်
ပိုနေတဲ့အင်္ကျီတွေပြန်ရောင်းချင်တယ်ဆိုလည်း ဒီလင့်ခ် https://goo.gl/rgW99T ထဲမှာအခမဲ့ပြန်ရောင်းလို့ရပါတယ်နော်
Author NwayHtetPosted on June 22, 2017 Categories OtherLeaveacomment on ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဝတ်ဖို့ ဒီဇိုင်း (၅) မျိူး
Ads.com.mm မှာဂိမ်းကစားရင်း Giordano အိတ်ရယူလိုက်ပါ
yoz….yoz…. ads ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် အမိုက်စားအစီအစဉ်လေးလာပါပြီနော်
မိုးတွင်းကာလ smart ကျကျ အဆင်ပြေပြေ ကျောင်းသွား ရုံးတက်ဖို့ Giordano ကျောပိုးအိတ်တွေကို ဂိမ်းလေးကစားရင်း အရယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်လေးပါ။
ဆော့ရမယ့် ဂိမ်းလေးကတော့ အရမ်းကို လွယ်ပါတယ်။ ads.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ ads logo ပါတဲ့ Giordano ကျောပိုးအိတ်ပုံလေးကို ကြော်ငြာအနေနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ကြော်ငြာကို လိုက်လံရှာဖွေရမှာဖြစ်ပြီး တွေ့ရှိသူများထဲမှ (၅) ဦးကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်၍ Giordano ကျောပိုးအိတ် (၃၈ဝဝဝ တန်) (၅)လုံးပေးသွားမှာပါ။
အဆင့်(၁) – ဒီပို့စ်ကို public share ပြီး comment တွင် share ထားသောပို့စ်ကို “Screenshot” မန့်ပေးပါ။
အဆင့်(၂)- ads logo ပါတဲ့ Giordano အိတ်ပုံ့နဲ့ ကြော်ငြာကို Ads.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာလိုက်လံရှာဖွေပါ။
အဆင့်(၃) -ကြော်ငြာရှာတွေ့ပါက ကြော်ငြာကို screenshot ရိုက်ပြီး ads.com.mm ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ ရဲ့ message box ကိုလာပို့ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ (message box တစ်ခုတည်းကိုသာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်)
မူရင်းပို့စ်အား Like and Public Share ထားတဲ့ Screenshot ကို Chatbox သို့ ပေးပို့ပါက အပိုထပ်ဆောင်း သဲလွန်စ ပေးသွားဦးမှာနော်…..
(ဒီအစီအစဉ်ကို ads နဲ့သက်ဆိုင်သော ဌာနများ၊ ads မှဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသူများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိပါ)
စည်းကမ်းချက်နဲ့ကိုက်ညီသော ကံထူးရှင် ၅ ယောက်ကို မဲနှိုက် ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ (၁၄)ရက်နေ့မှာ ကြော်ငြာပေးသွားမှာပါ
အဲဒီတော့ ဂိမ်းလေးကစားရင်း Giordano ကျောပိုးအိတ်လေးတွေအရယူကြစို့နော်။
ကြော်ငြာရှာဖွေရန်လင့်ခ် >> https://goo.gl/LQl1tU
Author NwayHtetPosted on June 20, 2017 June 20, 2017 Categories OtherLeaveacomment on Ads.com.mm မှာဂိမ်းကစားရင်း Giordano အိတ်ရယူလိုက်ပါ
လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ ဇွန်လ ၁၈ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် အဖေများနေ့မှာ အမှတ်တရ တစ်ခုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် အကြံဉာဏ်ပြုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် အပန်းမကြီးတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်လို့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ အမှတ်တရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ကြဦးနော်
အဖေများနေ့အတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလည်း ဈေးတန်တန်နဲ့ ပစ္စည်းကောင်းရှိတဲ့ ဒီလင့်ခ် https://goo.gl/g0Ka1L ထဲမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်နော်
(၁) ဘယ်အရာတွေက သင့်အဖေကို ပျော်ရွှင်နိုင်လဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ
ဒီနှစ်အဖေများနေ့က အားလပ်ရက် ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်မှာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလည်း အဆင်ပြေပါတယ် ငါးဖမ်းရတာကြိုက်လား အိမ်သန့်ရှင်းရေးတူတူလုပ်မလား ရုပ်ရှင်တူတူကြည့်မလား ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေ ပြန်ပြောပြခိုင်းမလား သူလည်းအဆင်ပြေ ကိုယ်လည်း အဆင်ပြေတယ်ဆို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်စေတဲ့နေရာမှာ သူနဲ့ စကားကြာကြာပြော အချိန်ပေးတာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်
(၂) ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ပါ ဒါမှမဟုတ် အပြင်ကို တစ်ခုခုတူတူထွက်စားကြပါ
သင့်အဖေက လက်ဆောင်ကြိုက်တတ်သူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် သူဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ အချိန်ကုန်ချင်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ် ဥပမာ- သင့်အဖေက မုန့်ဟင်းခါးကြိုက်တယ်ဆိုရင် အိမ်မှာမုန့်ဟင်းခါး အိုးကြီးချက်ပြီး တူတူစားကြတဲ့သဘောပေ့ါ
(၃) သူ့ကို အိပ်ရေးဝဝအိပ်ခိုင်းလိုက်ပါ
အရင်နေ့တွေမှာ သင့်အဖေက အလုပ်ရှိလို့စောစောထနေကြဆိုရင် ဒီနေ့တစ်ရက်တော့ သူ့ကို အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ခိုင်းလိုက်ပါ သူ့အတွက် ဟင်းတွေဘာတွေချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပွဲစီစဉ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူမနိုးအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ်လုပ်ပေ့ါ
(၄) Happy Father’s Day လို့ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့
အဖေများနေ့ဆိုတာ သိပေမယ့်လည်း ဤနေ့က သူ့နေ့ဆိုတာ ပြောပြဖို့မမေ့ပါနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူ သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်မရွေးဖက်ကြတတ်ပေမယ့် ကိုယ့်အဖေကို ဖက် ဖို့ကြဝန်လေးတတ်ကြပါတယ် ထိုနေ့မှာ အဆင်ပြေမယ်ဆို ကိုယ့်ဖေဖေကို ခဏဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ပြီး မိဘရဲ့နွေးထွေးမှုကို ခံစားလိုက်ပါ
(၅) ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာ မေးပါ
ကိုယ့်အဖေတွက် တစ်ခုခုစီစဉ်ရတော့မယ်ဆိုရင် တကယ်တမ်းကျ သူဘာကြိုက်တတ်လဲဆိုတာ ရုတ်တရက် မသိတာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် သူကြိုက်မယ်ထင်တာပဲဆိုတဲ့အရာတွေ လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတာထက် သူဘာလုပ်ချင်လဲ ဘာလိုချင်လဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးလိုက်တာက ပိုအဆင်ပြေမှာပါ ကိုယ့်မှာ အစီအစဉ်တွေဆွဲထားပြီးကာမှ သူက အိမ်မှာပဲအနားယူချင်တယ်ပြောလည်း သူလုပ်ချင်တာကို လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ
(၆) စကားပြောဖို့ အချိန်ပေးပါ
တကယ်တမ်း တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ် တွေ့ရတဲ့အချိန်က အရမ်းနည်းပါတယ် အဖေများနေ့မှာ ၂ယောက်လုံးအားလပ်ရတယ်ဆိုရင် ကိုယ်သိချင်နေတာတွေ သူ့ကိုပြောပြချင်နေတာတွေ သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင်ကောင်းကောင်းဖလှယ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ
(၇) ငယ်ငယ်တုန်းက ဓာတ်ပုံတွေ ပြန်ကြည့်ပါ
အိမ်မှာအေးဆေးနေမယ်ဆို သိမ်းထားတဲ့ အယ်လ်ဘမ် ဟောင်းတွေ ထုတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံတွေပြန်ကြည့်ပြီး ငယ်ငယ်ကအချိန်တွေဆီ တစ်ခေါက်ပြန်သွားလိုက်ပါ
အပန်းမကြီးတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်လို့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ အမှတ်တရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ကြဦးနော်
Author NwayHtetPosted on June 15, 2017 June 15, 2017 Categories Ads.com.mm, Lifestyle, OtherTags Family, happy, LifeLeaveacomment on အဖေများနေ့အတွက် ဘာတွေကြိုတင်စီစဉ်မလဲ ?